Imaatinka Ralf Rangnick 'oo Ka Caawin Kara Manchester United Saxiixa Erling Braut Haaland'
HomeWararka CiyaarahaImaatinka Ralf Rangnick ‘oo ka caawin kara Manchester United saxiixa Erling Braut Haaland’
Imaatinka Ralf Rangnick ‘oo ka caawin kara Manchester United saxiixa Erling Braut Haaland’
November 27, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
ku biirista Ralf Rangnick ee Red Devils ayaa ka caawin karta inay hesho xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland .
Man United ayay u badan tahay inay ka mid noqoto tiro naadi ah oo u dagaalami doona Haaland sanadka soo socda, iyadoo 21 jirkaan la filayo inuu u dhaqaaqo ka hor ololaha 2022-23.
63 milyan oo ginni oo lagu burburin karo qandaraaska xiddiga heerka caalami ee dalka Norway ayaa noqon doona mid firfircoon xagaaga soo aadan, warbixin dhawaan soo baxday ayaana sheegeysa in Real Madrid ay tahay meesha uu doonayo weeraryahanka.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay AS , Rangnick, oo qarka u saaran inuu noqdo tababaraha cusub ee ku meel gaadhka ah ee Man United, ayaa ka caawin kara 20-ka jeer ee horyaalka Ingariiska inay lasoo saxiixdaan da’yarka baahida loo qabo.
Rangnick wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray Red Bull Salzburg oo Haaland ka heshay Molde sanadka 2019, 63 jirkaan ayaa la filayaa inuu u wareego doorka la-talinta ee Old Trafford marka uu qandaraaska maamulkiisu dhaco bisha May.
Haaland – oo sidoo kale lala xiriirinayo Manchester City , Chelsea , Bayern Munich iyo Barcelona – ayaa dhaliyay 70 gool waxaana loo diiwaan geliyey 19 caawin 69 kulan oo uu u saftay BVB tan iyo markii uu uga soo dhaqaaqay Salzburg.